Kedu ụzọ ziri ezi isi dee edemede blog maka backlinks?
Ọtụtụ mgbe, mgbe ọ na-abịa n'usoro nke Nchọpụta Nyocha Search (SEO) na ọnụ ọgụgụ, ọtụtụ mmadụ na-enwe mgbagwoju anya ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna na-enwe nkụda mmụọ site na ịmepụta profaịlụ backlink maka ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog ha.Ma gịnị bụ nsogbu ahụ? Ihe ahụ bụ ụlọ azụ backlinks na inweta ha - bụ n'ezie ihe abụọ dị iche iche. Nzụlite backlinks pụtara ịkpụ ma ọ bụ ịzụrụ ha nanị maka nzube SEO. N'ikpeazụ - ịkwesịrị ka ha chọta onwe gị n'etiti nsonaazụ ọchụchọ 10 kachasị na Google. N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, ịnweta backlinks pụtara na i kwesịrị ha. Ịgbado oge na mgbalị iji dee ederede akụkọ dị mma maka backlinks bụ kpọmkwem ihe na-anọchi anya inweta ndị kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mara otú ị ga-esi gbanwee okwu nchịkọta akụkọ ziri ezi maka backlinks nke na-arụ ọrụ n'ezie iji meziwanye mgbalị SEO gị n'ọtụtụ. Ya mere, gịnị mere "blog" ahụ ji kwuo na "ga - enweta" gị dịka ọtụtụ backlinks HQ na elu PageRank dịka o kwere mee? Ka anyị lelee ya!
Ma tupu anyị amalite, ka anyị chee ihu - inweta azụlinks pụtara na ị ghaghị ịbụ onye ọrụ-centric siri ike. Site na echiche nke SEO, ọ bụrụ na ị mee onye ọrụ obi ụtọ, ị ga-eme ka nchọnchọ Google chọọ. M na-ekwu na ọ dịghị mkpa iji nnukwu oge na-achọ ihe ọ bụla loopholes ma ọ bụ aghụghọ ịghọ aghụghọ ule ma ọ bụ manipulate na isi search algorithm. Ọ bụrụ na m nwere ike nweta oge m, mana ọ ga - akara gị mma iji ya - ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụlite ezi ahịa nke na - enweta ezigbo ego, ị ghaghị itinye mgbalị gị iji mee ka onye ọrụ ahụ nwee obi ụtọ.N'eziokwu, ime ka ha niile nwee obi ụtọ na ha nwere ike ịgbanwere onye nke ọ bụla n'ime ndị enyemaka gị na - azụ ahịa - ndị ọrụ obi ụtọ ga - eme ka ị nwekwuo backlinks, kesaa ọdịnaya gị na weebụ, ma ọ ga - abụ na ị ga - ndị na-azụ gị n'ezie.
Ịlaghachi na isi - ọ bụ ụzọ ziri ezi isi nweta nkọwa dị mma nke blog maka backlinks - ka m gosi gị usoro ahụ na ọnụ ọgụgụ. Nke a bụ ihe ịkwesịrị ime:
Bụrụ Onye Ọrụ-Centric
Mee ka mgbasa ozi SEO zuru ezu na-agagharị na onye ọrụ naanị - nke mbụ. Ihe niile ị ga-echeta bụ na Google na-achọpụta azụmazụ ọ bụla dị ka "votu. "N'ụzọ dị otú a, ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ịmatakwu" akara "ka ọ bụrụ na okwu ọ bụla dị iche iche dị icheiche maka backlinks na-aghọ ezigbo uru.
Lekwasị anya na Ogo, ọ bụghị Nzuzu
Ọ dịghị mkpa ịsị na a ghaghị ime ihe nile n'ụzọ ọ bụla, na-enweghị ngwa ngwa iji gbasaa ọtụtụ posts dịka o kwere omume. Ma ọ bụghị ya, ihe niile a ga-eme ga-akọwa Google dịka spam ma ọ bụ ụdị ntụrụndụ. N'ụzọ dị otú a, cheta - a naghị ekwe ka ndị mmadụ na-eme ihe ngosi ebe a, ebe ọ bụ na otu nchịkọta blog maka backlinks wepụrụ n'ebe ndị ọzọ na Ịntanetị nwere ike imerụ gị ogo.
Mee ka afọ ojuju gị
Dị ka m kwuwororịrị, ịmepụta ihe dị ukwuu nke ihe mkpofu agaghị enweta gị ebe ọ bụla. M na-ekwu na naanị otu ụzọ ị ga-esi mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blọọgụ gị na-eto bụ ịbịaru ụzọ ma pụọ ​​na asọmpi ahụ. N'ịtụle okwu "ezigbo" gị na blog maka backlinks, ana m akwado gị iji jide n'aka na ịnweghị ihe ọ bụla dị mkpa maọbụ oge ị na-aza. N'ụzọ dị otú a, egbula oge iji nweta nyocha data zuru ezu n'oge ọ bụla ị na-ekwu okwu ka ọ ghara inwe enweghị àgwà ma ọ bụ enweghị oke omimi. Ọzọkwa, ị ghaghị ịdị na-eme ihe ma na-adị njikere mgbe nile ime ihe ahụ ndị ọzọ na - adịghị elelị (gụnyere ndị na - agba gị na ndị na -.
E kwuwerị, echefula iche echiche maka ụzọ dị iche iche maka ọdịnaya gị na-ewepu nzaghachi blog. Echere m na e nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ iji nweta njikọ, dịka ide ederede na ozi site na mgbe ụfọdụ, ma ọ bụ n'ime oge gị Source .